जेल परेको कुकुरले तीन महिनापछि भेट्यो मालिक – AKSANCHAR
ए.के. सञ्चार । ९ असार २०७९, बिहीबार १६:५२
सुर्खेत । तीन महिनादेखि डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा थुनामा रहेको कुकरले मालिक पाएको छ । २६ फागुन ०७८ मा मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ चितैकुनाबाट घोरल मारेको अभियोगमा मालिक च्याम्पा तामाङसहित उनका छोरा दावा छोर्देन, टासी, छिमेक तामाङ र कुकरलाई १४ चैतमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरू धरौटीमा छुटेका थिए । तर, कुकुर भने नियन्त्रणमै थियो ।
मालिक छुटे पनि कुकुरलाई भने डिभिजन वन कार्यालय मुगुको थुनामा राखिएको थियो । यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर डिभिजन वन कार्यालयले भने कुकुर थुनामा नरहेको र मालिकले लैजान सक्ने भन्दै स्पष्ट पारेको थियो ।कुकुरको मालिक तीन महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्पर्कमा आएपछि जिम्मा लाएर पठाएको डिभिजन वन कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी प्रनिल देवकोटाले बताए ।
कुकर मालिक च्याम्पा तामाङका अनुसार मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–१ चितैबाट सम्पर्क गर्न असहज भएको बताए । डिभिजन वन कार्यालय मुगुले कुकर लैजाउ भनेर समयमै जानकारी नदिएको तर पनि कुकुर सकुशल रहेको जानकारी पाएपछि लिन आएको उनले बताए । जंगली जनावर चोरी सिकारी आरोपमा उनीहरूविरुद्ध कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशबाट च्याम्पा र दावा छोर्देन १२ जेठमा जनही ७० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । टासी र छिमेक भने साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
९ असार २०७९, बिहीबार १६:५२
हुम्ला । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले निवर्तमान गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरेको छ । संघीयता कार्यन्वयनको पहिलो निर्वाचिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पाँचवर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै सिमकोट गाउँपालिकाले सम्मान गरेको हो । गाउँपालिकाको विकासका लागि निवर्तमान गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सिमकोट गाउँपालिकाले सम्मान कार्यक्रम गरी सम्मान गरिएको हो । […]
२६ मंसिर २०७८, आईतवार १८:३७
दाङबाट सल्यान जाँदै गरेकाे जीप दुर्घटना, तीन जनाकाे मृत्यु
१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १८:२५
कस्तो छ दुर्घटनामा घाईते रेनुको अवस्था ?
पञ्चपुरीमा-३ मा उम्मेदवारबीच सहमति नहुदा गाेलाप्रथा नहुने
२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:५९
वायुको प्रभावका कारण आज दिनभरजसो नै मौसम बद्ली रहने, देशका पहाडी क्षेत्रमा हल्का पानी पर्ने
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १०:२८
भरतपुरको ताजा अपडेट, रेणु दाहालले अग्रता कायमै
२ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०७:४१
सुर्खेतको सिम्तामा पुनः मतदान सुरु